Card Android SD 5. kaabta
Marka soo socda si ay Android gurmad card SD, waxaad ku qor karaa sababo badan. Halkan, waxaan ku qor qaar iyaga ka mid ah, kaas oo aad ku qasbi laga yaabaa in la sameeyo gurmad card SD Android.
Waxaa la go'aamiyey in qaab aad telefoon Android ama kiniin ah, laakiin waxa ay doonayaan in ay sii dhammaan faylasha kaarka SD.
Ma rabtaa inaad ka rujin telefoonka Android ama kiniin ah, laakiin ka Cabsan in dhammaan faylasha tagtay waa in ka dib soo afjarno.
Iska loo isticmaalo si ay u sameeyaan gurmad card SD ah oo joogto ah Android inay sii warbixin-shaqsiyeedkaaga oo nabad iyo xasilooni.
Qorshee si ay kor firmware ee Android, laakiin waxa ay ka saari doonaan wax walba oo ku saabsan kaarka aad SD. Sidaas darteed, aad rabto in aad gurmad ah.
Waxaa weli tahay in aad ogolaanaysaa files gurmad kaarka SD Android sababo kale oo badan. Wax kasta oo ay tahay, in qayb ka mid ah kuwan soo socda, waxaan u tegayaa inaan idin tusin sida loo sameeyo iyada oo aan ka kaaftoomi kasta.
Qaybta 1. kaabta Card SD Android inay Computer la USB ah Single Cable Qaybta 2. kaabta SD Card Android 2 waxtarka leh ee cid saddexaad Tool Qaybta 3. kaabta Android Faylal ay si SD Card oo aan wax Tool Qaybta 4. Top 5 Android Apps in kaabta faylasha si ay Android SD Card
Qaybta 1. kaabta Card SD Android inay Computer la Cable ah USB Single
Hab lacag la'aan ah oo u fudud in ay gurmad aad files ee Android files card SD waa in la isticmaalo cable USB ah Buur telefoonka Android ama kiniin sida adag dibadda.
Tallaabooyinka aasaasiga ah, hoos waxaa ku laakiin qaar ka mid ah kala duwanaanta qalabka android kala duwan.
1. qaada ah cable USB Android in lagu xiro qalabka Android si aad u computer
2. your computer, aad u ogaato Android drive dibadda adag. Waxaa fur oo aad ka heli folder card SD ah.
3. Sawirka fayl si aad u ogaato kuwa meesha photos, music, video, waraaqaha waxaa lagu badbaadiyey, sida DCIM, Music, Video, Photos, iwm
4. Copy fayl iyo iyaga paste on your computer.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in gurmad dhammaan faylasha aad kaarka SD Android, waxa kale oo aad nuqul ka kartaa dhammaan fayl iyo files ka card SD in kombiyuutarka. Si kastaba ha ahaatee, faylasha qaar waxaa laga yaabaa in aan loo isticmaali karaa wakhti kasta oo dheeraad ah oo ku xiga ee aad u celinaynaa in kaarka SD, sida folder App.
Waa sahal in la sameeyo.
Music kaabta, Photos Video, waraaqaha iyo xiriirada (u tag Qaybta 4aad si aad u hesho more info)
Ma gurmad app, iyo app xogta karaa
Kaliya laga heli karaa computer Windows ah.
Qaybta 2. kaabta Card SD Android inay Computer 2 ee muhiimka ah Tool cid saddexaad
Sida aan kor ku soo sheegnay, habka Qaybta 1 aad u saamaxaaya in ay gurmad files badan oo card SD in computer, laakiin waxa ay weli ku guuldareysto inuu gurmad kale files muhiim ah. Sidaa darteed, in qaybta 2, waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa laba qalab-saddexaad: Wondershare MobileGo for Android iyo Transfer File Android inay card SD Android gurmad kombiyuutaro Windows iyo Mac.
Jidka 1: app ee kaabta xogta, SMS, Xiriirada oo badan oo ku saabsan kaarka SD Android on computer Windows
Wondershare MobileGo for Android waa tababare All-in-mid Android. Waxa aad bixisaa fududahay in kaarka SD Android helaan, si aan kugu sameeyo gurmad file si fudud. Intaa waxaa dheer, waxaa kasoo muuqday gurmad hal-click ah in si degdeg ah oo ku haboon laguu suurogeliyo in aad gurmad app, xogta app, xiriirada, sawiro, SMS, music, video, abuse call iyo jadwalka.
1. Download iyo rakibi Wondershare MobileGo for Android on computer Windows ah.
2. Orod oo xirmaan telefoonka Android ama kiniin in computer Windows via WiFi ama cable USB.
3. phone Your Android ama kiniin si dhakhso ah loo ogaado, markaas uu soo bandhigay in carmalka hoose.
4. In uu furmo suuqa hoose, guji Files khaanadda bidix. Markaas, ee guddiga midig, guji Card SD . Markaas, oo dhan fayl iyo files kaarka SD waxaa lagu muujiyey. Dooro galalka aad doonayay oo files ka dibna riix dhoofinta .
Haddii aad rabto in gurmad app, xogta app iyo faylasha kale, oo aad kala socon kartaa sidan. In uu furmo suuqa hoose, u tag Tools aad jeceshahay waxaa laga yaabaa. Riix kaabta One-click . In ka pop-up gurmad hadal, hubi faylasha aad rabto in aad raad raac: xiriirada, fariimaha qoraalka ah, app, xogta app, jadwalka taariikhda, abuse wac, sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow. Markaas, guji Back Up in iyaga gurmad.
Jidka 2. kaabta Card SD ee Android on Mac
Transfer File Android yar software ah in ay fududahay in la siiyo kaarka SD ee telefoonka Android oo kiniin ah helaan.
Tallaabada 2. waa Run iyo xirmaan telefoonka Android ama kiniin si Mac.
Tallaabada 3. Transfer File Android lagu ogaan doonaa telefoonka Android ama kiniin ah oo ka dibna la furo folder card SD aad u. Markaas, files gurmad aad la doonayo iyo fayl si Mac.
Qaybta 3. kaabta Android Faylal ay si SD Card aan Tool kasta
Sida aad ka arki, music, video iyo sawiro si toos ah badbaadiyey kaarka SD Android. Xiriirada, SMS iyo kuwa kale waa laga reebay. Si kastaba ha ahaatee, in badbaado xogta, laga yaabo inaad doonaysaan inaad kuwaas oo xogta in kaarka SD helaan jid ay ugu gurmad. Marka aan sidaa yeelno, waxa kale oo aad ku badbaadin karto gurmad ah si aad u computer.
Waxaan raadin internet-ka, iyo ugu dambayntii ay helaan waddo ay si xor ah u xiriirada gurmad buugga Cinwaanka in kaarka SD. Sida SMS kale, xogta app, waxaad u baahan tahay in ay taageero ka qaar ka mid ah qalabka xisbiga saddexaad barbaro. Qaybtan, waxaan idin tusayaa sida loo xiriiro Android gurmad in kaarka SD.
Tallaabada 1. telefoonka Android ama kiniin ah, tuubada Xiriirada app. Riix Xiriirada tab si ay u muujiyaan oo dhan xiriirada badbaadiyey ee aad taleefan Android ama kiniin.
Tallaabada 2. Tubada badhanka dalwaddii tagay si button menu. Markaas, guji Import / dhoofinta .
Tallaabada 3. Dooro dhoofinta in Kaydinta USB (kaarka SD Gudaha) ama dhoofinta in kaarka SD (kaarka SD dibadda).
Tallaabada 4. Markaas, dhammaan dadka ay khuseyso waa la badbaadin doonaa sida file .vcf ah oo badbaadiyey kaarka SD ah.
Qaybta 4. Top 3 Android Apps in kaabta faylasha in Android SD Card
App kaabta & Soo Celinta: Kala duwan leh qalab 4.3 / 5 Free
My Pro kaabta Android 1.6 iyo ilaa, 4.6 / 5 $4.99
Helium - App nidaameed oo kaabta Android 4.0 iyo ilaa 4.3 / 5 Free
1. App kaabta & Soo Celinta
App waxay la shaqeysaa weyn marka ay timaaddo in ay barnaamijyadooda gurmad ku yaalla in ay kaarka SD Android. Markaas, mar kasta oo aad u baahan tahay, waxaad u soo celin kartaa barnaamijyadooda ka hayaan ee ku saabsan kaadhka SD si fudud. Ka sokow, waxay ku siinaysaa awood u leeyahay inuu soo diro Dalka Chine in ay saaxiibadaa la wadaago.
Download kaabta App & Soo Celinta ka Google Play Store >>
2. Pro kaabta
My Pro kaabta si buuxda u la jaan qaada Android 1.6 iyo sare. Waxaa aad u saamaxaaya in ay MMS gurmad, SMS, barnaamijyadooda, photos, music, videos, xiriirada, wac log, jadwalka, Bookmarks browser, goobaha nidaamka, digniinta, shaashadaha guriga, dictionary, playlists music, apns, iwm Marka aad xogta laga badiyay shil , waxaad isticmaali kartaa hayaan in ay si fudud u celinaynaa.
3. Helium - App nidaameed oo kaabta
Iyadoo Helium, awoodo barnaamijyadooda gurmad iyo xogta app in aad kaarka SD Android ama kaydinta daruur si ammaan ah aad. Waxa kale oo aad samayn kartaa jadwalka ee gurmad. Intaa waxaa dheer, in aad u hagaagsan karo xogta app ka aaladaha kale ee Android mid aad using-- xataa haddii ay yihiin shabagga ku kala duwan.
Download Helium - App nidaameed oo kaabta ka Google Play Store >>
Tababare 6 Android App Top Waxaad u
Top 5 Maareeyayaasha Memory Android Waxaad u
> Resource > Android > A Full Tusaha SD Card ee kaabta on Phone Android oo Tablet